कांग्रेसमा देउवा नेतृत्व र सत्ताको जोडघटाउ – Vishwanews.com : Popular Nepalese News Media in New York, USA
Home / News / विचार / कांग्रेसमा देउवा नेतृत्व र सत्ताको जोडघटाउ
कांग्रेसमा देउवा नेतृत्व र सत्ताको जोडघटाउ
० मोहन बास्तोला
काठमाडौं । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा सबैभन्दा पुरानो इतिहास बोकेको दल नेपाली कांग्रेसको झण्डै डेढ हप्ता लगाएर सम्पन्न गरेको १३औं महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सभापति पदको पगरी मात्र गुथाएको छैन । उनको समूहलाई भारी बहुमतसमेत दिएर पार्टी सञ्चालनमा सहज बनाइदिएको छ । सुदूरपश्चिममा देउवाको उदयसँगै नेपाली कांग्रेसको कोइराला परिवारको हातबाट आधाआधी भए पनि राजनीतिक नेतृत्व बाहिरिएको छ । महामन्त्रीमा डा. शशांक कोइराला उदाएका छन् भने केन्द्रीय सदस्यमा पनि डा. शेखर कोइराला र सुजाताले कोइराला परिवारको हवाला दिंदै विजयी हुने मौका पाएका छन् । उनीहरु विजयी भए पनि देउवा विजयी भएसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग देखा पर्ने अनुमान गरिएको छ । लामो समयको नाकाबन्दी र भारतले नरुचाएको एमाले सरकार पनि कांग्रेस महाधिवेशनपछि फेरिन्छ भन्ने चर्चाले पनि अहिले राम्रो बहस पाएको छ ।
त्यसो त निकै कठोर मानिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि देउवाको विजयीसँगै केही हतास अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । कम्तीमा दुई वर्ष यही सरकार टिक्छ भन्ने ओलीवाणीमा पनि नेपाली राजनीतिमा देउवाको आगमनसँगै सत्ता फेरबदलका जोडघटाउ सुरु नहोलान् भन्ने प्रष्ट अडान देखिन्न । अहिले चिया पसलदेखि तरकारी बजार र राजनीतिक वृत्तमा सरकार फेरबदलको चर्चा सुरु भएको छ । सत्ता समीकरणको जोडघटाउमा कांग्रेस लाग्ला कि नलाग्ला ? ओली सत्ता समीकरणको जोडघटाउमा माइनस होलान् ? प्रचण्डको कता होला समर्थन ? हिन्दू राज्यको अडानमा रहेका कमल थापाको समर्थन कांग्रेसलाई होला ? यस्तै प्रश्नहरुको चाङले नेपाली राजनीति चैतको आगमनसँगै तातिन थालेको छ ।
असोज ३ मा संविधान जारी गर्न सफल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच सीमांकन र नामांकनका विषयमा पनि मिलेर जाने सहमति भएको थियो । तीन दलले चाहेपछि शान्ति, संविधान र समाजको अग्रगमन सम्भव छ भन्ने सन्देश ०६२÷६३ को जनआन्दोलनदेखि नै देखिँदै आएको थियो । बीचमा दलबीच मनमुटाव आउँदा संविधान बन्न नसकेको, संविधानसभासमेत भंग गरेर कर्मचारी संयन्त्रको सरकार बनाउनुपरेको नजिर पनि थिए । ठूला तीन दल मिलेको खण्डमा संविधान टाढाको विषय होइन भन्ने सन्देश दिन सफल दलहरूबीच संविधान जारीको केही दिनमै भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा मनमुटाव देखिएपछि कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएको थियो । मुलुकको दोस्रो पार्टी नेकपा एमालेले एमाओवादी र साना पार्टीको साथ लिएर सरकार बनाउनु परेको अवस्था थियो । यति मात्र होइन, भारत र मधेसी दलले नरुचाएको यो सरकार कांग्रेसको महाधिवेशनसम्म हो भन्ने राजनीतिक पण्डितहरूको बोली पनि ठूलै थियो । अहिले कांग्रेसको महाधिवशेन सम्पन्न भएसँगै राजनीतिक पण्डितहरूका तर्क–बितर्क पनि बाहिर आउन थालेका छन् ।
अहिले भारतले लगाउँदै आएको अघोषित नाकाबन्दी लम्बिएर सकिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नाकाबन्दी नखोली भारत भ्रमणमा जान्नँ भन्ने अड्डीमा थिए । संयोग भन्ने वा भारतको नियत तराई–मधेसमा आन्दोलन जारी राखेका केही मधेसकेन्द्रित दलले आन्दोलन फिर्ता लिए । अघोषित नाकाबन्दी खुल्यो । भारतले रातो कार्पेट ओलीका लागि बिछ्यायो र अहिलेसम्मकै ठूलो स्वागतसहित ओली भारत भ्रमणमा गए । भारतसँग जलविद्युत्मा लगानीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले अपिल गरे । त्यो अपिलसँगै विभिन्न सम्झौताका चर्चा पनि भए । भारत बसाइँ अहिलेसम्मकै उपलब्धिमूलक रहेको भनेर खबर आए । ओलीले पनि साताव्यापी भ्रमण नेपाल र भारतको सम्बन्ध सुधारमा कोशेढुङ्गो भएको अभिव्यक्ति विमानस्थलबाटै दिए । तर, ओलीले भनेजस्तो भएन । बरु ओली भारत भ्रमणबाट फर्केपछि नेपालको विकास, जलविद्युत्मा सहयोग त परको कुरा भारतले नेपाललाई दिँदै आएको सहयोगमा समेत ४० प्रतिशत बजेट कटौती भयो । यसले के देखाउँछ भने भारत अझै पनि नेपालमा कम्युनिष्टको सरकारसँग खुशी छैन । उसले कानमा सुटुक्क भन्ने गरेको हिन्दू राज्यको माग पूरा नगरेसम्म नेपालका राजनीतिक दल र उसको सरकारलाई असहयोग गरिरहने पक्का छ ।
यहीबेला प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणको तयारीमा छन् भने चीनले आफ्नै विशेष विमानमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई चीन लैजान आतुर छ । ऊ भारतले गरेको भन्दा ठूलो र बढी स्वागत गर्न आतुर छ । नेपाललाई गरिने सहयोग पनि बढाउने पनि चीनको चाहना छ । यो भ्रमणलाई सार्थक बनाउने अभियानमा सरकार लागिरहेका बेला राजनीतिक वृत्तमा भने कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आगमनसँगै सत्ता फेरिन्छ कि भन्ने चर्चा छ । यो चर्चा भारतले गरेको सहयोग कटौती, अहिलेसम्म सहमतिमा आउन नसकेको मधेसी दलको आन्दोलन चर्काउने उद्घोषसँग पनि जोडिएको छ । यस्तो अवस्थामा के साँच्चै शेरबहादुर देउवा सत्ता परिवर्तनको खेलमा लाग्लान् ? अहिले सबैले चासो जगाएका हुन् । देउवा आफैंले केही बोलेका छैनन् । त्यसो त उनले विजयी भएपछि पनि नेपाली कांग्रेसले रचनात्मक प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्ने अभिव्यक्ति दिए । तर, उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरु देउवाको त्यो कूटनीतिक अभिव्यक्ति भएको जिकिर गर्छन् ।
राजतन्त्र, हिन्दू धर्मबारे पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा व्यक्त गर्ने नेपाली कांग्रेसका कोइराला परिवारका सदस्य शशांक कोइराला यसपटक पार्टी महामन्त्री बनेका छन् । उनले महाधिवेशनअगाडि यही विषय उठाए र कोइराला परिवारका सदस्यका रूपमा नेपाली कांग्रेसमा महामन्त्री निर्वाचित भए । हिन्दू राज्यकै कुरा गर्ने खुमबहादुर खड्का पनि नेपाली कांग्रेसका भावी उपसभापतिका रूपमा चर्चा चलिरहेको छ । २५ खुला केन्द्रीय सदस्यमा सर्वाधिक दोस्रो मत पाएका खड्काले कांग्रेस हिन्दू राज्यमा गएन भने ठीक हुन्न भन्दै अघिल्ला सभापति सुशील कोइरालालाई समेत बेलाबखत केन्द्रीय समिति बैठकमै अप्ठ्यारोमा पार्ने दबाब दिएकै थिए । अहिले उपसभापति र महामन्त्री हिन्दू राज्य पक्षधर देखिएका छन् भने अर्का मनोनीत महामन्त्रीका दाबेदार बिमलेन्द्र निधि पनि संविधान जारीमा असन्तुष्ट र मधेस आन्दोलन ठीक भन्ने पात्रका रूपमा पर्छन् ।
यस्तो अवस्थामा नेपाली कांग्रेस के भारतको चाहनाअनुरूपको हिन्दू राज्यको मुद्दा उठाएर सत्ता फेरबदलका लागि लाग्ला ? केन्द्रीय सदस्यको मतपरिणामसँगै थप मनोनयन हुने केन्द्रीय सदस्यहरूको अनुहार कस्तो हुने हो ? सभापति शेरबहादुर देउवा आफैंमा पश्चिमाहरूको प्रिय पात्र त मानिन्छन् नै । अहिले भारत पनि उनका पक्षमा उभिने सम्भावना उस्तै छ । भारतनिकट भनिएका नेता कृष्ण सिटौला र गगन थापाको पराजयसँगै हिन्दू पक्षधरको संरक्षण र सहयोगमै देउवा सभापतिमा निर्वाचित भएकाले आफ्ना एजेन्डामा हिंडाउन भारतका लागि देउवा बलिया, विश्वासिला पात्र हुने सम्भावना पनि छ । यस्तो बेला भारतले नेपालको धर्मनिरपेक्षता नरुचाइरहेका बेला कतै केही साताभित्रै सत्ता फेरबदलको कुरा उप्काउँछ या दोस्रो ठूलो पार्टीको सरकार स्वीकारे बसिरहन्छ ? देउवाले नै पहिला मुख खोल्न जरुरी छ । हिन्दू राज्य र राजतन्त्रबारे केही नेताहरूले बोले पनि सत्ता परिवर्तनका विषयमा केही केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेको औपचारिक भाषण मात्र बाहिर आएको हो ।
सरकार सुरुदेखि नै समस्याको घानमा परेको छ भने मधेसी दल पनि अहिलेसम्म सरकारसँग सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । यस्तो बेला यही सरकारमा समावेश भएर कांग्रेस मुलुकको अग्रगमनको काममा अघि बढ्छ या सरकार फेरबदलको कुरा गरेर अघि बढ्छ, यसै भन्न सकिन्न । तर, स्थानीय निकायलगायतको निर्वाचनको तयारीमा रहेको सरकारसँग पौँठेजोरी खेल्नु, पहिलो पार्टीलाई लगातार पहिलो नै कायम राख्नु देउवाको पहिलो चुनौती हो । योसँगै भारतको चाहना र पार्टीका बलशाली नेताहरूको पनि मुखमा किलकिले रहिरहेको हिन्दू राज्य पुनःस्थापनाको मुद्दामै पहिला देउवा पार्टीमा पेलिनेमा शंका छैन । धर्मनिरपेक्षतामा गएको मुलुकको पहिलो र ठूलो पार्टीको महाधिवेशनसँगै एकाएक धेरै नेता भारतको चाहना मिसिएको हिन्दू राज्यमा आउने प्रयास गरे भने त्यसले पार्ने असरचाहिं मुलुकमा कस्तो होला ? देउवाले यसबारे पनि सोच्न जरुरी छ । उनलाई हिन्दू धर्मको मुद्दामा साथ दिने अहिलेको सरकारको साझेदार राप्रपा नेपाल पनि सारथि त बन्न सक्ला । तर, सरकार सजिलै फेरेर सत्तामा पुग्ने काममा हिन्दू राज्यको मुद्दा पेचिलो बन्यो भने यो सरकार फेरबदल कांग्रेस र देउवाका लागि सहज भने पक्कै छैन ।